Mari dzeGlobal Fund Dzounza Mutauro
Chikunguru 02, 2009
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti dziri kufara nedanho rakatorwa ne Global Fund, rekuti mari dzinopihwa masangano ane chekuita nezvehutano, dzibve kubazi re United Nations re UNDP dzichienda kumasangano aya, dzisingatangi dzapinda muhomwe ye National Aids Council, sezvanga zvichiitika makore apfuura.
Izvi zvakaitwa mushure mekunge bhanga guru renyika rakatora mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica ndokushandisa mari iyi muzvinhu zvisinei ne HIV/Aids.
Asi vamwewo vanoshanda nemasangano anobatsira vanorarama ne HIV/AIDS vanoti kuenda kwemari iyi pasi pe UNDP kuchanonotsa rubatsiro kuti rusvike muvanhu, sezvo UNDP ichiburitsa mari iyi chete kana yagutsikana nechikumbiro chinenge chaitwa nemasangano aya.
Va Frank Guni inyanzvi inoshanda munyaya dze HIV/AIDS, uye vachishanda nesangano re HIV/AIDS Compliance Systems International kuno ku America. VaGuni vanoti danho reUNDP rakanaka zvikuru sezvo mamwe masangano anga achitadza kushandisa mari idzi zvakanaka.
Va Itai Rusike ndivo Executive Director ve Community Working Group on Health. VaRusike vanoti hurongwa hutsva huchaita kuti mari dzinonoke kusvika kuvanhu.
Hurukuro naVa Frank Guni
Hurukuro naVa Itai Rusike